Mareykanka oo deeq dheeraad ah siinaya Soomaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo deeq dheeraad ah siinaya Soomaliya
Dowladda Mareykanka, ayaa ku dhawaaqday in ay malaayiin doolar oo deeq ah u qoondeysay caawinta Soomaaliya.
WASHINGTON, D.C. - Afhayeenkii Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Edward Price, ayaa ku dhawaaqay in Dowladda Mareykanka, ay malaayiin doolar oo deeq dheerad ah u qoondeysay caawinta Soomaaliya, si wax looga qabto xaaladaha bini’aadannimo ee ka taagan dalka dhaca geesta Africa.
Mareykanku wuxuu siinayaa ku dhowaad $ 199 milyan oo gargaar bani'aadamnimo oo dheeri ah dadka Soomaaliyeed ee la soo kulmay tobanaanka sano oo cunto la'aanta ah, rabshadaha, abaaraha iyo daadadka, ay u sii dheeryihiin Ayaxa degaanka lama degaanka ka dhigay iyo cudurka faafa ee COVID- 19”. Ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Mareykanka.
Lacagtan dheeriga ah, ee ku dhow $200, Milyan, ayaa wadarta guud ee gargaarka bani'aadamnimo ee Mareykanka ugu talagalay Soomaaliya ka dhigeysa in ka badan $408 milyan Sanadka 2021, taas oo ka dhigan in USA, ay hore u qoondeysay lacag ka badan $200, Milyan, iskastoo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya uu sheegay in la jartay deeqihii caalamiga ahaa.
“Kaalmadan ayaa caawin doonta in badan oo ka mid ah ku dhowaad lix milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo u baahan gargaar bani'aadamnimo, oo ay ku jiraan saddex milyan oo qof oo ku barokacay gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale ku dhowaad 500,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ku sugan Jabuuti, Itoobiya, iyo Kenya”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Edward Price, wuxuu ku faanay in Mareykanku uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaar bini'aadanimo ka fuliya Soomaaliya iyo qaxootiga Soomaaliyeed ee gobolka ku nool, halka ay Washington, soo dhaweysay dadaallada UN-ka ee ah in indhaha lagu soo jeediyo dhibaatada ka jirta Soomaaliya.
“Waxaan weli ka walwalsanahay sii kordhinta baahida bani'aadamnimada, waxaana ka codsaneynaa deeq-bixiyeyaasha kale inay gacan ka geystaan isla markaana ay bixiyaan taageerada loo baahan yahay si loo badbaadiyo nolosha”. Ayaa lagu soo xiray warka ka yimid maamulka cusub ee Biden.